China Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion WPC Decking mpanamboatra sy mpamatsy | Lihua
Fananana entana:WPC Decking
Vidiny:4,88 $ / M
Fiaraha-miasa WPC decking
2.2m, 2.9m na namboarina
Park, Landscape, sehatra ivelany
● Ny takelaka misy ny fantsom-panafody na satroka dia tabilao faharoa an'ny WPC. Izy ireo dia noforonina tamin'ny fonony izay mifamatotra eo amin'ny vatan'ny tabilao mandritra ny famokarana. … Ny fizotry ny co-extrusion dia misy ny fampiasana ny «antioxidants», ny loko, ary ny «inhibitors UV» ho an'ny famitana ny fotony
● Ny tabilaon'ny mpiara-miasa amin'i Lihua dia nahavita loko tsy manam-petra sy tena izy, tsy mampitaha ny hazo voajanahary fotsiny, ity haitao mandroso sy manavao ity dia ahafahana mampifangaro loko tsy manam-paharoa, manome ny iray amin'ireo takelaka mitambatra tsara tarehy indrindra.
● Efitra efatra miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana ho an'ny fanamboarana, azonay atao tsara ny manome fotoana anao. Afaka manome safidy bebe kokoa ho anao koa izahay. Apetrakay amin'ny vokatra manokana ny vokatra semi-vita, rehefa vita ny fitsaboana dia hamboarinay ireto takelaka ireto ho ny fanapaha-kevitrao.
Maina ny fanoherana EN 15534-1: 2014 Fizarana6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Tombana pendulo Pend36 Toro lalana Longtitudinal: midika hoe 56, Min 55
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.4 Toro marindrano: midika hoe 73, Min 70
Mamaky fanoherana EN 15534-1: 2014 Fizarana6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 Tombana pendulo Pend36 Toro lalana Longtitudinal: Midika 38, Min 36
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.4 Toro marindrano: Midika 45, Min 43
Toetoetran'ny lasitra EN15534-1: 2014 AnnexA -F'max: Midiny≥3300N, Min≥3000N Hery hiondrika: 27,4 MPa
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.2 -Deflection ambanin'ny enta-mavesatra 500N mean≤2.0mm, Max≤2.5mm Modulus amin'ny elasiticity: MP MP 3969
Enta-mavesatra farany ambany: Midika 3786N, Min 3540N
Fivoahana amin'ny 500N:
Midika: 0.86mm, Max: 0.99mm
Mivonto sy mitroka rano EN 15534-1: 2014 Fizarana8.3.1 Midina ny fivontosana: ≤4% ny hateviny, ≤0,8% ny sakany, -0,4% ny halavany Midina ny fivontosana: 1,81% ny hateviny, 0,22% ny sakany, 0,36% ny halavany
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.5 Max fivontosana: ≤5% ny hateviny, ≤1,2% ny sakany, -0,6% ny halavany Max Swelling: 2,36% ny hateviny, 0,23% ny sakany, 0,44% ny halavany
Fitrohana rano: Midika: 4,32%, Max: 5.06%
Midika: ≤7%, Max: ≤9%
Fanoherana ny fikolokoloana EN 15534-1: 2014 Fizarana7.5 Hamafisan'i Brinell: 79 MPa
EN 15534-4: 2014 Fizarana 4.5.7 Tahan'ny fanarenana elastika: 65%
Teo aloha: Fanoherana toetrandro any ivelany Wood Composite WPC Hollow Decking
Manaraka: Fiaraha-miasa ivelan'ny trano miaraka amin'ny Wood Composite WPC Cladding
Sintomina fampidirana boaty fampidinana
F1: Firy ny orinasanao? Inona ny sandan'ny vokatra isan-taona?
F2: Inona no fitaovana fitsapana anananao?
F3: Inona ny fizotran'ny kalitao?
F4: Inona ny vokatra azonao? Ahoana no nahatratrarana azy?
F5: Mandra-pahoviana ny androm-piainan'ny vokatra WPC?
F6: Iza amin'ireo fe-potoana fandoavam-bola no hekenao?
F7: Raha ampitahaina amin'ny hazo, inona ny tombony azo amin'ny vokatra WPC?
F8: Mila hosodoko ve ny vokatra WPC? Inona no loko azonao omena?
A: Satria ny maha samy hafa azy amin'ny hazo, ny vokatra WPC tenany ihany, mila sary hosodoko fanampiny izy ireo. Amin'ny ankapobeny dia manome loko 8 lehibe izahay toy ny Cedar, mavo, kesika mena, hazo mena, volontany, kafe, volondavenona mavo, volondavenona manga. Ary koa, afaka manao loko manokana izahay isaky ny fangatahanao.
WPC decking ivelany
Rihana fametahana WPC
Fanesorana ivelany WPC
Tantera-drano vita amin'ny hazo Composite roa loko Co-extrusio ...
Fanesorana ivelany WPC, Fanapahan-tsokosoko WPC, fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanesorana WPC ivelany, Rihana fametahana WPC, Fitaovana WPC,